Shilalekha » राष्ट्रियसभामा विपक्षीको आक्रोश :प्रधामन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधान मिचेर देशलाई भड्कालोमा पुराए ! राष्ट्रियसभामा विपक्षीको आक्रोश :प्रधामन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधान मिचेर देशलाई भड्कालोमा पुराए ! – Shilalekha
राष्ट्रियसभामा विपक्षीको आक्रोश :प्रधामन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधान मिचेर देशलाई भड्कालोमा पुराए !
ओलीले संसद् विघटन गरेर विश्व रेकर्ड कायम गरे
१७ असार २०७८, बिहीबार २२:५२
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा आठौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमै विपक्षी दलहरू सरकारमाथि खनिएका छन् ।
आजदेखि सुरु भएको राष्ट्रिय सभाको बर्षे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा बोल्दै काँग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले प्रतिनिधिसभा विघटन र राष्ट्रपतिको भूमिका प्रति प्रश्न उठाएका हुन् । उनले राष्ट्रपतिजस्तो गौरवको संस्था केवल प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो त्यही गर्नेमा सिमित भएको टिप्पणी गरे ।
त्यस्तै माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता दीनानाथ शर्माले प्रधामन्त्री र राष्ट्रपतिले एकलौटी अधिकार प्रयोग गरेको आरोप लगाए । आफ्ना गुटका मानिसलाई मात्रै अघि बढाउने परम्पराले राष्ट्रिय संकट आएको उनको भनाई छ । उनले ओलीभित्रको दम्भ र घमण्डले देशलाई भड्कालोमा पुराएकोसमेत प्रष्ट पारे ।
‘मुलुकमा कोभिड महामारीको संकट छ । त्यो संकटभन्दा ठूलो संकट प्रतिगमनको संकट हो’, सम्बोधनका क्रममा उनले भने,’हामीलाई सुरुमा दुई तिहाइको दम्भ देखायौँ । त्यसपछि हामीले न पार्टी जोगाउन सक्यौँ, न जनप्रतिनिधि संस्थालाई जोगाउन सक्यौँ । हामी असफल भयौँ ।’
सम्बोधनको अन्त्यमा शर्माले भने,’यो अधिवेशन दुई चार दिनमै अन्त्य नहोस् ।’
त्यसैगरी राष्ट्रिय सभामा जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै सांसद प्रमिला कुमारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेर विश्व रेकर्ड बनाएको आरोप लगाइन् ।
साथै आफ्ना नेता र पार्टीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले झुक्याएकोसमेत उनले बताइन् । उनले भनिन्,‘मेरा आदरणीय नेताहरु, जो प्रधानमन्त्री ओलीजीको झुठो आश्वासनको जालमा फस्नुभएको छ। उहाँहरुलाई त्यो छलकपट रुपी जालबाट बाहिर निस्किन र जनता समाजवादी पार्टीलाई बलियो बनाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।’